Ikhompyutha - lena, okokuqala kunakho konke, amakhompyutha. Ngenxa ukuhlanganiswa yalezi amadivaysi e Isobho abaningi manje akusona isimanga. Nokho, lokho esikulindele kuyakufanelekela zonke esetshenziswa igama elithi "i-computer", eqinisweni, inegama egcwele "computer siqu". Futhi kuyanda ngisho "notebook siqu" eminyakeni yamuva. Kusho "ephathekayo" esichaza kumadivayisi eselula.
Mobility njengoba umgomo ukuthwala
PC kungenzeka ephathekayo ideskithophu. Ubuso bekhompyutha - iyikhompyutha emhlanganweni obugcwele i imishini okuhlangene enikeza amandla nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa, kodwa kuboshelwe ngenxa bulkiness yayo endaweni eyodwa. Yiqiniso, manje sizama ukukhiqiza kakhulu ngendlela izingxenye ezincane kungenzeka, ekhombisa mncane futhi igundane mobile engenantambo, kodwa namanje wawungaphansi lula PC ephathekayo. yelephuthophu - ke lincane kakhulu futhi capacious ngaphezulu ibhethri (kudeskithophu yena, njalo ukusebenza kusukela enethiwekhi abamdingi nempilo yebhethri ende). Nokho, kuthinta ukusebenza kumadivayisi ezifana, okuyinto kuba ngaphansi. Nokho, amakhono yezamakhompyutha kwamanye amadivaysi ephathekayo futhi ukuba mikhulu.
izigaba ezintathu zezindaba laptops
Izigaba ezintathu eziyinhloko, emele i-laptop, yilesi:
It is kule ngezigaba ethulwa emakethe. Nokho, abantu abavamile bathambekele ukudida lokhu amagama, kusekelwe eqinisweni ukuthi kungukuthi ngokwanele ababeyizazi art. Ziyakwazi ngezinye izikhathi bedidekile futhi ochwepheshe, kusukela isinqumo umngcele owodwa noma namanye amadivayisi leqembu elithile kuboniswe ngokucacile kakhulu. Ozimele zivame ukufakwa ubukhulu nesisindo devaysa futhi esigabeni ngasinye has izindinganiso zalo siqu.
Eyokuqala ikhompyutha ephathekayo - laptop. Kuyinto ephathekayo computer uhlelo yayo acwebile kakhulu, ngomqondo ongokomfanekiso, ifomu.
I-Laptop - idivayisi elincane kakhulu. Uma sihlola ngokuningiliziwe elithi "ithanga" lihunyushwa ngokuthi "ngamadolo", okusho ukuthi idivayisi kufanele libekwe le ngxenye yomzimba womuntu.
Umqondo "ikhompyutha ephathekayo" futhi "ikhompyutha ephathekayo" esihlobene eduze kweqane nomunye - ngokwesibonelo, i-Google umhumushi ngenkani ubona kubo njengoba omqondofana, nakuba lokhu akulona iqiniso ngokuphelele.
Izici eziyinhloko laptops
Ukuze laptop izici zihlanganisa lezi ezilandelayo:
usayizi wesibuko kufanele okungenani eziyishumi nane, kodwa hhayi ngaphezulu kuka nesikhombisa amayintshi;
ihluzo amakhadi esakhelwe ukuhlinzeka eliphezulu ihluzo;
ikhibhodi enkulu, ukhululekile, futhi enwetshiwe;
njalo i drive optical (ngamanye amagama - drive);
umthamo webhethri ikuvumela ukuba basebenze autonomously amahora amathathu noma ngaphezulu-ke;
izingxenye kalula replaceable (uma zokugwema ukuphuka).
Konke lokhu kuholela yokuthi laptop ezinhle iba ideskithophu esikhundleni agcwele. Yena - ikhompyutha ephathekayo, akusiyo ungaqiniseki, kodwa ukusebenza ongancintisana amadivayisi ongokoqobo.
Notebook - kusukela igama lesiNgisi elithi "ikhompyutha ephathekayo" ( "Amanothi") futhi "beech" ( "ukubhuka"). Kuyinto idivayisi ephathekayo nge ukuhamba okusezingeni eliphezulu. Kuyinto laptop izacile futhi minimalist, kodwa ngokuvamile kubiza okufanayo noma ezibizayo ngenxa ukuhamba kwabo.
Phakathi notebook izici:
impilo yebhethri ende;
usayizi wesibuko ku ezahlukene amayintshi nambili nane.
Lena division zakudala ezincwadini kanye laptops, okuyinto ngesikhathi samanje siyashintsha. Okuningi zingatholakala imigomo "ikhompyutha ephathekayo" futhi "notebook". Ukuze uthole incazelo eningiliziwe yalesi kusigaba isici esiphawula leli notebook walibiza kuhlanganiswe izakhiwo, kanye wesikrini isukela amayintshi nane ukuze nesikhombisa (njenge-laptops).
Netbook - "beech" ( "incwadi") ngoba ukusetshenziswa Inthanethi ( "cha"). Ngokuvamile, notebook encane, ukuqapha idayagonali ezingekho ngaphezu nantathu amayintshi, kuba netbook. ukusebenza lakhe kancane, kodwa umsebenzi ezizimele ifinyelela amahora angaphezu. On a netbook ngeke isebenze-olunzulu ngokugcwele izinhlelo, ngeke kuphakama ubunzima lapho esebenza spreadsheet izithombe. Ngo amadivayisi enjalo esishunyekiwe ngemoto, futhi inkumbulo (ezifana RAM kanye idrayivu kanzima) inenani ephansi kakhulu kunalokho-laptops.
Kodwa netbooks anemisila eliphezulu inethiwekhi adapters, futhi ukuhamba yabo kakhulu: enesisindo esingaphansi 1 kg wabekwa izikhwama evamile, ngoba kungaba mncane impela - isikrini osayizi 7 amasentimitha.
Synonym netbook njengoba isikhathi isigaba sokugcina - inothibhuki encane, lapho ultraportable. Kulula phawula indlela bushelelezi, kodwa ukuhwebelana engqubuzanayo kusuka isigaba eyodwa kuya kwenye libonise Ukufiphalisa kohlaka esingaphezulu kwalemibandela.
Futhi uma wonke lokho amanothibhuku?
Izinhlobo ezichazwe ngenhla azibonisi isimo emakethe namuhla. Hhayi wathinta phezu PC tablet kanye amafoni smart, futhi PDA abalahlekelwe nokudlanga yabo. Okulandelayo kuzoxoxwa imayelana nabo.
Ephathekayo ikhompyutha tablet ngokuthi i-tablet. Ngokubukeka, evelela sici - ukuntuleka ikhibhodi njengenhlangano kwidivaysi yokufakwayo futhi esikhundleni a ogcwele touch-screen kokusetshenziswa kubonwa main sokusebenza.
Lezi zingqimba abangu nakakhulu elahlekile umkhiqizo kuka netbooks, kodwa yokusebenza ezizimele zabo isikhathi iyakhula. Kulula ukuqaphela ubuhlobo ezilinganiselwe.
Ngo amaphilisi kujwayele ukuthi anele multimedia amakhono kanye nokufinyelela ku-intanethi - kuhloswe Computing ezingaba zedivayisi.
It is njengoba nomqondo ithebhulethi laptop, okuyinto nosizo ikhibhodi isikrini sokuthinta namanje enamathiselwe ezaziwayo.
Pocket laptop yayiningi kakhulu lapho Smartphones ungazange Ugcwalise emakethe. Kwaba usayizi encane kakhulu cell nedivaysi Computing. CCP ngokuqinile exhunywe OS zabo, futhi eminyakeni eyakhishwa zenzelwe ukusetshenziswa njengenhlangano abantu umhleli ibhizinisi. Ngalesi sikhathi esifanayo, Smartphones babe umsebenzi ofanayo noma nakakhulu, ukuze CCP ilahlekelwe nokudlanga yayo.
Izinhlobo computer aphathwayo isikhathi eside ihlanganisa Smartphones. Phela, zingabantu kokubili PDA kanye mobile ifoni okuvamile. Smartphones Inamandla babe yizinhlobonhlobo, ufana a netbook ubuthakathaka + okunika amandla ukuxhumana kwamangqamuzana. Ngokwengxenye enkulu lawa Isobho esitholakalayo touch screen, nakuba zikhona imodeli push-inkinobho.
Qaphela: Ukukhuluma kumakhompyutha kumadivayisi ephathekayo, kubalulekile ukusho program e-computer ephathekayo, okungukuthi, labo angadingi ukufakwa. Ziyakwazi kakhulu ukusetshenziswa nje netbooks ukuthi Kuningi isidingo asanele namandla wekhompyutha.
Ukusetha i-router Zyxel Keenetic - akukho lutho okungathenjelwa kulo lula!
Drum umshini ngokumelene wesigubhu
Calorie uphizi. Kanjani ukudla ukuze afanelekele?
Ezihlabayo okuphansi: izinhlobo, ikakhulukazi zokutshala kanye nokugcinwa. nezihlahla ezikhula ngokushesha
Sizofunda uzigqoka? Fashion 2012 - ibhulukwe, ohlakaniphile, Tights